किन घट्दै छ लोकसेवामा आवेदन? उपेक्षामा सरकारी जागिर - Everest Dainik - News from Nepal
किन घट्दै छ लोकसेवामा आवेदन? उपेक्षामा सरकारी जागिर
विमल कोइराला– लोक सेवा आयोगमा सङ्घतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आवमा २०७५/७६ मा ७५ प्रतिशत दर्खास्त कम परेको छ । देश सघीय सरचनामा गइसक्दा र कर्मचारी समायोजन भइसक्दा अहिलेको परिवेशमा लोकसेवामा आवेदन घट्दै गएको देखिन्छ ।
कुनै बेला क्रान्ति आलेले छोरी माग्न जाँदा छोरीक बाबुले सरकारी जागिर अएर आउ अनि मात्रै मेरी छोरीसँग विहे गर्न पाउँछौ भन्ने सन्देशको गित गाएका थिए । हुनु पनि कुनै बेला थियो सरकारी जागिर खानै पर्ने । सरकारी जागिर खानेको मान र शान दुवै हुने ।
लोकसेवा आयोगले दरखास्त आह्वान गर्दा हजारौं हजारले आवेदन गर्ने । तर अब समय बदलियो । यसपटक भने लोकसेवाले कर्मचारीका लागि आवेदन ७५ प्रतिशतले घटेको छ । देश संघीयतामा र कर्मचारी समायोजन भइसकेको अवस्थामा सरकारी जागिरतर्फ वितृष्णा देखिन थालेको छ ।
याे पनि पढ्नुस स्वीकृति नलिई कर्मचारीले लोकसेवाका तयारी कक्षा पढाउन नपाउने
लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा आव २०७५/७६ मा ७५ प्रतिशत दर्खास्त कम परेका छ । गर्त वर्ष आयोगमा कूल एक हजार १ सय ७४ पदका लागि कूल एक लाख ४३ हजार ८ सय ४० जनाको दर्खास्त परेका थिए । यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा बढी पदमा दरखास्त आह्वान गर्दा आवेदक घटेका हुन् ।
कूल एक हजार ४४८ अर्थात् ३२ प्रतिशत महिला र तीन हजार १ सय २६ अर्थात् ६८ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । स्थायी ठेगानाका आधारमा प्रदेश २ का नागरिकले यो वर्ष लोकसेवामा सबैभन्दा बढी आवेदन दिएका छन् । प्रदेश २ बाट २९ प्रतिशतको आवेदन परेको छ । सबैभन्दा कम दर्खास्त पर्नेमा जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, नवलपरासी पश्चिम र डोल्पा छन् । सबैभन्दा बढी दर्खास्त २१–२५ वर्ष उमेर समूहबाट ३५ प्रतिशत परेको छ । सरकारी जागिरप्रति मोह घटदा समयान्तरले मुलुकलाई नोक्सानी पु¥याउन सक्ने र योग्य एवं दक्ष जनशक्ति सार्वजनिक प्रशासनमा कम हुन सक्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस बहुविवाह गर्ने सरकारी जागिरबाट बञ्जित
निजामती प्रशासनका विज्ञ एवं पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला लोकसेवाप्रति घट्दो तथा निजी एवं गैर सरकारी जागिरतर्फ बढ्दो आकर्षणले राष्ट्रका लागि दूरगामी असर गर्ने विश्लेषण गरेका छन् । मुलुकको भविष्यको प्रशासनिक नेतृत्व हाक्ने सरकारी सेवाप्रति आकर्षण घटन नदिइ दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न ध्यान दिन जरुरी भएको कोइराला बताउँछन् ।
पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाकाअनुसार सरकारले आकर्षण बढाउन अनेकन उपायहरु लगाउन जरुरी छ । कोइरालाले त सरकारी जागिरमा आकर्षण बढाउन अभियान नै चलाउनुपर्ने हुन सक्ने औँल्याएका छन् । सरकारले यो मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने कोइरालाको तर्क छ ।
निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट काम र योग्यताअनुसार सेवा सुविधा पाउने एवं व्यक्तित्व विकासमा राजनीतिक एवं अन्य दबाब र हस्तक्षेप नहुने भएर पनि सरकारी सेवामा वितृष्णा बढेको हो । सरकारी सेवाको आकर्षण बढाउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । –रिपोर्टस नेपालबाट
ट्याग्स: लोकसेवा, सरकारी जागिर